” မလွမ်းစကောင်း လွမ်းစကောင်း -(ရှေးရှေးကမန္တလေးအပိုင်း-15)” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ” မလွမ်းစကောင်း လွမ်းစကောင်း -(ရှေးရှေးကမန္တလေးအပိုင်း-15)”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Oct 26, 2010 in Drama, Essays.. |5comments
မန်းလေးညဈေးတန်းအကြောင်းကိုပြောတော့ ညဈေးတန်းကို အဖယ်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလဲ မှန်တယ်လို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ မန်းလေးညဈေးတန်းဖွင့်ထားတဲ့နေရာက မန်းလေးမြို့ရဲ့ အလည်ခေါင်ဖြစ်နေတာရယ် အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေ တောင်နဲ့မြောက်ကို ဆက်သွယ်စရာ လမ်းမကျယ်ကျယ်ဆိုတာကလဲ ဒီ84လမ်းမကြီးဘဲရှိတာကိုး။ နောက်ပြီးတော့ အနောက်ကနေ အရှေ့ဘက်ကိုတက်မယ်ဆိုရင်လဲ ဆက်သွယ်စရာလမ်းမကြီးက 26ဘီလမ်းမကြီးဘဲရှိပြန်ပါတယ်။
ဒီထောင့်ချိုးနေရာကျတဲ့နေရာမှာ ဟိုဘက်ဒီဘက်ပိတ်လို့ဈေးဖွင့်ထားပြန်တော့လဲမီးရေးထင်းရေးလို အရေးပေါ်ကိစ္စမျုိးကြုံလာရင် လှည့်ပါတ်ပြီးသွားရတော့ ကြန့်ကြာတာပေါ့လေ။ ဒီညဈေးတန်းကို ပြောင်းဘို့အကွက်ဆိုက်လာတာကလဲ မန်းလေးမှာ မကြုံစဘူးထူးကဲလှတဲ့ မီးလောင်မူ့တွေကို ကြုံလာရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က မန်းလေးမှာ မီးအကြီးအကျယ်လောင်တာသိပ်မကြားမိပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေများ ညကြီးမင်းကြီးမီးလောင်တယ်အသံကြားလို့များ ကလေးတွေက အိပ်မူံစုံမွှားနဲ့ထလာရင်လူကြီးတွေက ပြန်အိပ်ခိုင်းပါတယ်။ မီးလောင်တဲ့နေရာနဲ့ကိုယ်နေတဲ့အရပ် လေးငါးပြလောက်ဝေးတယ်ဆိုရင် အေးဆေးပါ အချိန်တန်ငြိမ်းသွားမှာဆိုပြီး ပြန်အိပ်ကြတာများပါတယ်
။တစ်ခါတစ်လေမှာတိုက်ဆိုင်မူ့ဆိုမလား တွက်ချက်တာ တော်တယ်မှန်တယ်ဘဲဆိုမလား ဆိုတဲ့ ဒွိဟဖြစ်စရာကိစ္စတွေက လောကမှာကြုံတတ်ပါတယ်။ သက်သေပြတိုင်းတာလို့မရဘူးလို့လဲဆိုချင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါက ဘာကိုမှအယုံအကြည်မရှိဘူး လက်တွေ့မှဘဲယုံတယ်ဆိုတဲ့ အတော်လေးကိုခေါင်းကျောမာတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ တစ်ရက် သူ့ညီမအလတ်လေး က မေလ(10)ရက်နေ့မှာ မင်္ဂလာဆောင်ဘို့ရက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါနဲ့ဘဲလဆန်းရက်တစ်ရက်မှာမင်္ဂလာဆွမ်းကပ်မယ့်နေ့ အတွက် သူတို့အိမ်က ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းကိုသွားပြီး လျှောက်ထားပါတယ်။ ဆရာတော်ဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာ ဆရာတော်က သူတို့ကို မင်္ဂလာဆောင်ရက်ကိုပြောင်းရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ရှေ့တစ်ရက်တိုးရင်တိုး နောက်တစ်ရက်ဆုတ်ရင်ဆုတ် ဆိုပြီးပြောပါသတဲ့ ရှေ့တစ်ရက်တိုးတာက ပိုကောင်းမယ်လို့ မိန့်လိုက်ပါသတဲ့။ လောကီရေးရာတွေမှာ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်တာ ပြောတာ မရှိတဲ့ဆရာတော်က ထူးထူးခြားခြားပြောလိုက်တော့ သူတို့မိဘတွေကလဲ အလေးမထားဘဲမနေရဲပြန်ပါဘူး။သူတို့ကလည်းဒီမင်္ဂလာဆောင်ရက်ကို ရွေးစဉ်ကလဲ လက်လွတ်စံပယ် ရွေးချင်တဲ့ရက်ရွေးခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ နာမယ်ကြီးပေ့ဆိုတဲ့ဆရာကိုသွားလို့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဇာတာတွေကိုပြလို့ ဆရာတွက်ပေးတဲ့ သုံးရက်ထဲက တစ်ရက်ကိုအားလုံးတိုင်ပင်ပြီးယူခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ရွေးတဲ့မေလ(10)ရက်နေ့ဆိုတာကလဲအစိုးရရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအစိုးရ၀န်ထမ်းတွေဆိုတော့ ရုံးပိတ်ရက်ကိုဦးစားပေးရွေးခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒါနဲ့ဘဲ ဆရာတော်ပြောသလို ရှေ့တစ်ရက်တိုးလို့ မေလ(9)ရက်နေ့ကိုရွေးလိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီအခါမှာ ပြဿနာရှာသူက ကျနော်သူငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ငှားထားတဲ့ခန်းမကလဲ မေလ(9)ရက်နေ့ကိုလဲမပေးနိုင်ပါဘူး မနက်ရောညပါ နှစ်ပွဲစလုံးလက်ခံပြီးဖြစ်ပါသတဲ့။အဲတော့ ခန်းမမှာ မလုပ်ဘဲ သူတို့အိမ်ကခြံဝိုင်းထဲမှာဘဲ ဥယျာဉ်ပွဲလုပ်ပြီးဧည့်ခံဘို့ပြင်ရပါတော့တယ်။
ရိုက်ပြီးသားဖိတ်စာတွေပေါ်မှာလဲ ရက်စွဲတွေလိုက်ပြောင်း၊အဝေးက မိတ်ဆွေသင်္ဂဟတွေတစ်ချို့ကို ဖိတ်စာကြိုပို့ထားပြီးဖြစ်တော့ မင်္ဂလာဆောင်ရက်ပြောင်းတဲ့အကြောင်းကို စာတွေလူကြုံတွေဖုန်းတွေနဲ့အသိပေးအကြောင်းကြား အလုပ်တွေများမှများဖြစ်လေ သူငယ်ချင်းကပူညံဆူညံလုပ်လေပါဘဲ၊
ဒါပေမယ့်သူအိမ်က ဂီတ၀ါသနာအိုးသူငယ်ချင်းကျေနပ်အောင် အရင်က ငှားထားတဲ့တီးဝိုင်းကို စရံအဆုံးခံပြီး သူငယ်ချင်းရဲ့ဖိုးဆိုချင်ဖိုးတီးချင်ဝိုင်းကိုစိတ်တိုင်းကျလုပ်တော့လို့ခွင့်ပြုတော့မှ နားအပူသက်သာကြရပါတော့တယ်။ဖြစ်ချင်တော့ မင်္ဂလာဆောင်လုပ်မယ့်မနက်မှာ မိုးတွေရွာတော့ ဧည့်ခံပွဲကပျက်မလိုဖြစ်နေတဲ့အခါတီးဝိုင်းနဲ့မတီးရမှာစိုးတော့ ရွှေကိုယ်တော်ကတစ်ခါပူညံပြန်ရော။အဲဒီအခါမှာလဲ လူကြီးတွေခင်ဗျာ မိုးတွေတားကြ ကန်တော့ပွဲတွေပေးကြနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်ကြပြန်တော့ မိုးရွာရင် တီးဝိုင်းပျက်မှာစိုးတဲ့သူငယ်ချင်းက ထပ်ပူပြန်ရော။ တိုတိုပြောကြပါစို့ရဲ့မင်္ဂဆောင်မတိုင်ခင်မှာ မိုးရွာတာတွေရပ် နေတွေသာတော့လာပြီး မင်္ဂလာပွဲလည်းအောင်မြင်စွာဆင်နွဲနိုင်ပါတော့တယ်။နှမလင်နေလို့ဖင်ကြိမ်းရမယ့်ကျနော့်သူငယ်ချင်းလည်း အားရပါးရကြီးကို ဆိုလိုက်တီးလိုက်ရတော့မှာ ပူတာတွေရပ်သွားပါတော့တယ်။
နောက်ရက် မေလ(10)ရက်နေ ညနေစောင်းလေးမှာ မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ငှားထားတဲ့ခုံတွေ တီးဝိုင်းစင်တွေပြန်ပို့ဘို့ ကားပေါ်တင်နေကြတုံးမှာဘဲသူတို့အိမ်ရဲ့အနောက်တောင်ဒေါင့်ဘက်ကနေ မီးခိုးလုံးကြီးတွေတက်လာတာမြင်လိုက်ရပါတယ်။ ခဏနေတော့ မီးသတ်ဥသြသံတွေနဲ့အတူ နေရာအနှံ့က မီးသတ်ကားတွေမြို့အနောက်ဘက်ကိုသွားတာကိုရော ကားတွေလူသံတွေပွက်ပွက်ညံနေတာကိုကြားရတော့ ကျနော်တို့လဲ အပြင်ထွက်ပြီးစပ်စုတော့ မန်းလေး ဆိုင်းတန်းရပ်မှာမီးလောင်နေတာလို့ပြောသံကြားရပါတယ်။ကျနော်တို့လဲ စက်ဘီးကိုယ်စီထုတ်လို့ မီးလောင်တဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအိမ်ကို တတ်နိုင်သလောက်ဝိုင်းသယ်ဘို့သွားကြပါတယ်။ ကျနော်တုိ့ 25လမ်း ရေကြည်ညောင်ပင်နားရောက်တော့ အောက်ဖက်ကိုဆင်းလို့မရတော့ပါဘူး။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်အထုပ်တွေကို ဆွဲပြေးလာတဲ့သူတွေ၊အကျီင်္မပါဘဲတစ်နိုင်ထမ်းပြေးလာတဲ့ယောက်ျားတွေ ထမီရင်ရှားနဲ့ဆွဲမိဆွဲရာပြေးလာတဲ့မိန်းမတွေ ၊ ကလေးပျောက်ရှာနေတဲ့မိခင်တွေ လူပျောက်ရှာလို့အော်နေတဲ့သူတွေ နဲ့ ကမ္ဘာပျက်သလို ဆူညံပွက်လောရိုက်နေတဲ့မြင်ကွင်းက မမြင်ရက်စရာပါ။ကျနော်တို့လဲ ပြေးလာတဲ့သူတွေထဲက အသိတွေလက်ထဲပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကျနော်တို့စက်ဘီးတွေပေါ်မှာနိုင်သလောက်တင်ပြီး မီးနဲ့ဝေးသေးတဲ့ ကျနော်တို့အိမ်ဘက်ကိုခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန်သယ်ပေးကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်ကျနော်တို့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ လမ်းတွေလဲအကုန်ပိတ်ပြီး ၀င်ခွင့်မရတော့ပါဘူး။
လောင်တဲ့မီးအရှိန်ကလဲပြင်းသထက်ပိုပြင်းလာပြီး မီးလောင်အားကလဲ မြင့်သထက်မြင့်လို့လာပါတယ်။ မေလဇွန်လဆိုတာ ပုံမှန်အားဖြင့်အတော်ပူတဲ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က နေ့လည်ပိုင်းကတည်းက အတော်လေးရာသီဥတုက ပူပြင်းပါတယ်။ မီးစလောင်တာကတော့ မှောင်ရီပျုိးစညနေခြောက်နာရီပါတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ညနေပိုင်းမှာ26ဘီလမ်းရဲ့မြောက်ဘက်ခြမ်း 87-88ကြား ဆိုင်းတန်းရပ်မှာရှိတဲ့ ကားဝပ်ရှော့တစ်ခုမှာကားပြင်လာတဲ့ကားတစ်စီးက ကားသမားတစ်ယောက် ကားဆီတိုင်ကီထဲမှာ ဓါတ်ဆီကျန်မကျန်ကိုဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့ကြည့်ရာကနေမီးစလောင်တာပါတဲ့။
အဲဒီနေ့ကရာသီဥတုပူတဲ့နေ့ဆိုတော့ အရာဝတ္တုတိုင်းကလဲ ကျွတ်ရွနေတော့ မီးလောင်ဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာရယ်၊အဲဒီရပ်ကွက် က လူနေအိမ်ခြေတွေများတော့ ပြွတ်သိပ်နေတာရယ်၊မီးသတ်ကားဝင်စရာလမ်းလုံးဝမရှိတဲ့ ရပ်ကွက်ဖြစ်နေတာကြောင့် မီးကလောင်ခြင်တိုင်းလောင်လို့ကောင်းနေပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီအချိန်ကလည်း အိမ်တော်တော်များများက ထမင်းဟင်းချက်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။မီးလောင်တယ်ဆိုတော့ ထမင်းဟင်းချက်ရင်းတန်းလန်းက ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထပြေးပြန်တော့လဲ မီးကြွင်းမီးကျန်ကနေဆက်ပြီးလောင်ပြန်ပါသတဲ့။ မန်းလေးမြို့ကရှိသမျှမီးသတ်ကားအကုန်အပြင်မန်းလေးမြို့ပါတ်ဝန်း မှာရှိတဲ့တောင်မြို့စစ်ကိုင်းကျောက်ဆယ်အစရှိတဲ့မြို့တွေက မီးသတ်ကားတွေလာပြီးဝိုင်းညှိမ်းကြပေမယ့် မငြိမ်းသောမီးကို အားလုံးက အရှုံးပေးခဲ့ကြရပါတယ်။
26ဘီလမ်း (87-88)ကြားကနေစလောင်လိုက်တဲ့မီးက 26ဘီလမ်း မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ရပ်ကွက်တွေဖြစ်တဲ့
သံဝင်းရပ်၊ဆိုင်းတန်းရပ်၊အင်းဘဲရပ်၊ရုံးသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ (26ဘီလမ်းနဲ့ 22စီလမ်းကြား)နဲ့(87-89)လမ်းကြားက
အိမ်ထောင်စုတွေကို လောင်ကျွမ်းပြီးတာနဲ့တင်မရပ်ဘဲအရှိန်ကပိုကောင်းသထက်ကောင်းလာပြီး 22စီလမ်းကိုကျော်လွန်ပြီး
တောင်ပုလင်းဝင်း၊မြောက်ပုလင်းဝင်းအရပ်တွေကိုဆက်တိုက်လောင်နေရာကနေ မီးက87လမ်းရဲ့ အပေါ်ဘက်ကိုဆက်တက်လို့သွားပါတယ်။
22စီလမ်းနဲ့ 19လမ်းကြား87လမ်းအရှေ့ဘက်ခြမ်းကရပ်ကွက်တွေကိုဆက်လောင်သွားလိုက်တာ 86လမ်းမှာရှိတဲ့အမဲအိုးတန်းရပ်ကွက်တကွက်လုံးနဲ့19လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ရွှေပြည်အရပ်တွေကို မီးကအရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝါးမြိုသွားပါတယ်။ဒါနဲ့တင်မရပ်သေးဘဲ 19လမ်းမြောက်ဘက်8786ကြားမှာရှိတဲ့အရပ်တွေကိုဆက်ပြီးလောင်သွားပါတယ်။ 19လမ်းမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စပါးဂိုဒေါင်တွေ သစ်စက်ဝင်းတွေလဲရောက်ရော မီးလောင်စာတွေနဲ့ဆိုတော့ ဆက်တိုက်လောင်သွားလိုက်တာဘယ်လိုမှညှိမ်းလို့မနိုင်ထိန်းလို့မနိုင် ဆက်လောင်သွားလိုက်တဲ့မီးဟာ လမ်းတွေ့သမျှအိမ်မှန်သမျှကိုကွက်ကြား လောင်ချင်သလိုလောင်သွားလိုက်တာ13လမ်းလောက်မှာရှိတဲ့မီးလောင်စရာနည်းပါးတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနားရောက်မှမီးစွယ်ကျုိးလို့ရပ်သွားပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးလောင်သွားတဲ့အဆောက်အဦးကတော့ မန်းလေးရုပ်ရှင်ခြံထဲမှာရှိတဲ့ “ မြို့မအပျော်တမ်းတူရိယာအသင်းတိုက်“လို့စိတ်ထဲမှာ ထင်မိပါတယ်။ မီးလောင်သွားတဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေကိုနီးစပ်ရာကျောင်းတွေ ဘုရားတွေမှာ မီးဘေးဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်ထားတဲ့ဆီမှာ ခိုလှုံကြရပါတယ်။
ဒါကတော့မန်းလေးမှာ ပထမဆုံးအထိနာတဲ့ ဧရိယာတော်တော်များများပါသွားတဲ့ ဘာပစ္စည်းမှမယ်မယ်ရရ မသယ်နိုင်လိုက်တဲ့ မန်းလေးမြို့သူမြို့သားများကို အငိုက်မိစေတဲ့ မီးဘေးအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားပါတယ်။ အရင်က မီးဟေ့ဆိုရင် ဝေးပါသေးတယ်လို့ ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ မန်းလေးသူမန်းလေးသားတွေမှာ စက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းလေးမှာမထင်မှတ်ဘဲကိုယ်အနားကိုမီးတောက်တွေရောက်လာမှ လူချည်းဘဲလွတ်အောင်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့သူများပါတယ်။ အဲဒီမီးလောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျနော်မှတ်မိနေတာလေးတစ်ခုကတော့ 19လမ်းမြောက်ဘက်ခြမ်း ရွှေပြည်ဓမ္မာရုံနဲ့မျက်နှာခြင်းဆိုင်မှာရှိနေတဲ့ စပါးပုံကြီးက မီးတော်တော်နဲ့မငြိမ်းတာကိုပါ။ မီးသတ်ကားက ရေနဲ့ပက်လိုက် မီးဖွားတွေ က၀ုန်းကနဲထွက်လာလို့ ဆက်မပက်ဘဲရပ်ထားလိုက်ရနဲ့ ရက်တော်တော်လေးကြာလို့ မိုးရွာလိုက်တယ်ဆိုမှ ဒီစပါးပုံကြီးကို တငွေ့ငွေ့လောင်နေတဲ့ မီးက ငြိမ်းသွားပါတယ် ခန့်မှန်းခြေရက်နှစ်ဆယ်ကျော်ကျော်လောက်ကို ဒီစပါးပုံကြီးနားမှာမီးသတ်ကားတွေ အဆင်သင့်စောင့်နေရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အဲဒီမီးလောင်လိုက်တာဟာ မန်းလေးမြို့သစ်ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာဘို့ အစပြုလိုက်တာပါဘဲ။
ကျနော်မှတ်မိသလောက် အဲဒီရပ်ကွက်ကမီးဘေးဒုက္ခသည်တွေထဲကနေ ဘိုးဘွားပိုင်လို့အမည်ပေါက်ထားတဲ့အ်ိမ်တွေကိုသာ မူလနေရာမှာပြန်ပြီးနေထိုင်ခွင့်ပေးပါတယ်။ အခုလိုမီးအများကြီးလောင်သွားရတဲ့ အကြောင်းတရားထဲမှာ မီးသတ်ကားဝင်စရာလမ်းမရှိတာကြောင့် ဆုံးရှုံးသင့်တာထက်ပိုဆုံးရှုံးရတယ်လို့ ကောက်ချက်ချတာကြောင့်လဲ လမ်းတွေကို မီးသတ်ကားဝင်သာအောင်ပြန်ပြီး ဖောက်တာနဲ့မလွတ်ကင်းဘူးဆိုတဲ့ အိမ်နေရာတွေကိုရော၊ကိုယ်ပိုင်အိမ်ယာမရှိပေမယ့်လည်း အိမ်ထောင်စုဇယားဆိုတဲ့ လူဝင်မူ့ကြီးကြပ်ရေးကထုတ်ပေးထားတဲ့ အိမ်ထောင်စုဇယား ရှိတဲ့မိသားစုမှန်သမျှကို အရှေ့နဲ့အနောက် တွက်ရင် (86-73)လမ်းကြား နဲ့မြောက်ဘက် သိပ္ပံလမ်းနဲ့တောင်ဘက် မနော်ဟရီလမ်းကြားမှာပေ(40X60)အကျယ်ရှိတဲ့မြေကွက်တွေကိုဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ရောင်းပြီးနေရာချထားပေးလိုက်ပါတယ်။ 78လမ်းကိုရောက်လို့ ခင်စောမူဆီစက်ကွေ့ကိုကျော်ရင် ဆင်ဖြုကန်သင်္ချိုင်းဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကနေ အရှေ့ဘက်တဲ့တဲ့ကို သွားတဲ့လမ်းအသစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အခုမြို့သစ်ကိုဝင်တဲ့အဓိကလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ “သိပ္ပံလမ်းမကြီး “ပါဘဲ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက မန်းလေးတက္ကသို်လ်တောင်ဘက်ပေါက်နဲ့တည့်တည့် 73လမ်းက လမ်းပိတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ 73လမ်းအတိုင်းသိပ္ပံလမ်းကျော်ပြီးဆက်သွားလိုက်ရင်စိုက်ပျုိးရေးတက္ကသိုလ်ပိုင်တဲ့လယ်ကွင်းတွေလွန်တာနဲ့ဆက်သွားလို့မရတော့ပါဘူး။ လမ်းအလည်ခေါင်မှာသင်္ချိုင်းတစ်ခုနဲ့ရွာလေးတစ်ရွာက ကန့်လန့်ခံနေပါတယ်။ အဲဒီမြို့သစ်ပေါ်စက မြို့သစ်ထဲကိုသွားမယ်ဆိုရင် ၀င်လမ်းကောင်းကောင်းက 65လမ်းတစ်ခုဘဲရှိပါတယ်။ အနောက်ဘက်က ၀င်မယ်ဆိုရင် အခု ကညန ရုံးရဲ့အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ရေမြောင်းဘောင်ပေါ်က စက်ဘီးလောက်ဘဲသွားလို့ရတဲ့မြေလမ်းဆိုးဆိုးခိုးလိုးခုလုဖြစ်နေတဲ့လမ်းကလေးကနေတောင်ဘက်ကိုဝင်သွားရပါတယ်။ တော်တော်လေးသွားလို့မန်းလေးချမ်းမြသာစည်လေယာဉ်ကွင်းရဲ့ သံဆူးကြုိးကာထားတဲ့နေရာကိုရောက်ရင် ရေမြောင်းလေးကိုကျော်လိုက် ၊လယ်ကန်သင်းရိုးကလေးပေါ်မှာစက်ဘီးကို မလဲအောင်ထိန်းစီးနိုင်တယ်ဆိုရင် မြို့သစ်ထဲကိုအတိုဆုံးရောက်သွားနိုင်တဲ့ဖြတ်လမ်းလေးပေါ့။ အဲဒီဘက်က မသွားချင်ဘူးဆိုရင်ရန်ကုန်မန်းလေးလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့78လမ်းကနေတောင်ဘက်ကိုသွား
လေယာဉ်ကွင်းဆုံးသွားရင်အရှေ့ဘက်ကိုရေမြောင်းလေးကိုကျော်သွား။မြေလမ်းလဲမဟုတ်ကျောက်လမ်းလို့လဲမခေါ်နိုင်တဲ့ ဇလုံးဇခုကျောက်ကြမ်းလမ်းလေးပေါ်ကသွားလိုက်ရင် ရှင်ပင်အုံးအင်ဘုရားဘေးရောက်တယ်ဆိုရင် မနော်ဟရီလမ်းမပေါ်ကိုရောက်သွားပါတယ်။
အဲဒီမြို့သစ်ကိုပြောင်းစကနေရထိုင်ရအထာမကျသေးတဲ့မြို့ထဲကနေပြောင်းသွားတဲ့မိသားစုတွေများ တွေ့ရင် သူတို့ကိုကြည့်ရတာ အလွန်သနားစရာကောင်းပါတယ်။အရင်ကအိမ်အပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့ကျောက်လမ်းမပေါ်ရောက် ဈေးနီးကျောင်းနီး ။နေကြရတာကလဲ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း။ အမျိုးမတော်ပေမယ့်ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတွေလိုတစ်စုတစ်ဝေးကြီးနေခဲ့ကြရတာကနေတကွဲတပြားနဲ့နေရာချထားပေးတဲ့နေရာမှာသာ
နေကြရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အပြင်လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာက သွားရေးလာရေးကဝေးပြီးခက်ခဲ၊ လယ်မြေတွေကိုနေရာချပေးထားတော့ မြေတွေက မညီမညာနဲ့အဖုဖု အထစ်ထစ်။ရှိသမျှစည်းစ်ိမ်ကလည်းမီးထဲပါသွားတော့ဒီမြေကွက်လေးကိုတောင်အပိုင်ရအောင်အနိုင်နိုင်ဝယ်ရတော့ အိမ်ကလဲနေလို့ရရုံလောက်လေးဖြစ်သလိုဆောက်၊ တော့မိုးရွာအပူနေပူအခြောက်၊သစ်ပင်ဝါးပင်ကြီးကြီးမားမားကလဲမရှိသလောက်ဆိုတော့
နားခိုစရာအရိပ်ကလဲမရှိ၊လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတဲ့အလုပ်ကလဲမြို့ထဲမှာဆိုပြန်တော့ နေ့စဉ်သွားရပြန်ရတာအဝေးကြီး၊မိုးများရွာတယ်ဆိုရင်ရေတွေဝင်တာက ဒူးလောက်ပေါင်လောက်၊မြေတွေကလဲစက်ဘီးများစီးသွားမိရင်စက်ဘီးတောင်မလည်နိုင်လောက်အောင်ရွှံ့စေးတွေကကပ်၊ ဖိနပ်မချွတ်ဘဲများလမ်းလျှောက်မိရင်ဖိနပ်တစ်ခုလုံးကရွှံထဲနစ်လို့ပြတ်။အလုပ်အပြန်ကမိုးချုပ်ရင် ဘတ်စကားကမရှိဆိုတော့ တော်တော်လေးကို ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ချို့အမျုိးသမီးကြီးများဆိုတစ်ခါတစ်လေမြို့ထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့အသိမိတ်ဆွေများနဲ့တွေ့ကြရင်လက်ရှိနေရထိုင်ရခက်ခဲတဲ့ဘ၀ကို မျက်ရည်စမ်းစမ်းနဲ့ပြန်ပြောတာကိုမြင်ရရင် သူတို့နဲ့ရောပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။ ဒါကတော့ မီးလောင်ပြီးစ ပထမဆုံးတည်ခဲ့တဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့အတိတ်ကလေးက မန်းလေး မြို့သစ်အကြောင်းပါဘဲ။
အဲဒီအထဲမှာ ည ညမိုးချုပ်လို့ အလုပ်ပြန်ရရင် ဘတ်စကားက 78လမ်းလေယဉ်ကွင်းအဆုံးက ကျွဲဆည်ကန်သံလမ်းနားထိဘဲရောက်ပါတယ်။ မြို့သစ်ထဲထိမရောက်တော့ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ မြင်းလှည်းအကြုံရှိတတ်ပါတယ်။ စက်ဘီးရှိတဲ့သူများကတော့ သိပ်အခက်အခဲမရှိပေမယ့် လမ်းလျှောက်ပြန်ရသူအတွက်ကတော့ တော်တော်လေးလှမ်းတဲ့အပြင်လမ်းကမကောင်းလူကလဲပြတ်ပါတယ်။ လူပြတ်ပါတယ်ဆိုမှာထွက်လာတဲ့ အရပ်သတင်းလေးတစ်ခုကြောင့်မြို့ထဲမှာအလုပ်သွားလုပ်ပြီး ညမိုးချုပ်မှပြန်ရရှာတဲ့ အဖော်မပါတဲ့ လူတွေမှာ အခက်တွေ့ကုန်ပြန်ပါတယ်.။ ထွက်လာတဲ့သတင်းလေးကတော့ ………………………………………………………………..
ဦးပေါက် မန္တလေးမီးဆို ဦးကျားကြီးမီးက စပြောလေဗျာ။ ကျွန်တော်သိပ် မမှတ်မိတော့ဘူး။ မှတ်မိတာက ဦးကျားကြီး မီးလောင်တော့ ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေက တာရဲတန်းမှာ ရှိတဲ့ တောင်အိမ်ကို ပြေးရတာတော့မှတ်မိတယ်။ နောက် ဘဏ်နားမီးရောက်လာလို့ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ မီးငြိမ်းတာလည်း မှတ်မိတယ်။ အဲဒီနေ့ည က အိပ်ရတာ အရမ်း အိုင်ပြီးပူတာလည်း မှတ်မိတယ်။ ထမင်းထုတ်တွေ ကို တစ်အိမ်တစ်ထုတ်နဲ့ ၁ လလောက် ပေးရတယ် ဆိုတာလည်း မှတ်မိတယ် အဲလောက် ဘဲ မှတ်မိတော့ တယ်။
မန်းသားလေးရေ မန်းလေးမီးဆို ဦးကျားကြီးကစပြောလို့
မရဘူးလေ သူကနောက်မှ မန်းလေးမှာမီးအကြီးအကျယ်လောင်တာ ဆိုင်းတန်းဝင်းက
စတာလေ ဒါကြောင့်မင်းဦးပေါက်က ဆိုင်းတန်းမီးကစ
ဘူး ကားဂိတ်ကပါ မိုးကုတ်ကားဂိတ်တခုက ဓါတ်ဆီပ္ပေါ
သြော် ဟုတ်လား ဦးကြီး.. ကျွန်တော်က ကျွန်တော်စမှီတဲ့ မီးက ပြောမိတာနေမှာ။ ဟုတ်မယ်.. မန္တလေးနဲ့ မီးဆိုတာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ရင်းနှီးနေတာ ဘယ်တုန်းက ဘယ်မီးက အကြီးဆုံးမှန်း မသိလိုက်လို့နော်..
ဆော်ရီးနော်.. ကိုပေါက်နဲ့ ဦးကြီး..
နောက်ဆုံးမှာ ဦးပေါက်ရပ်ထားတဲ့ ထွက်လာတဲ့ သတင်းလေးကတော့…ဆိုတာကို ကျနော်ဆက်လိုက်ပါ့မယ်။ သရဲကြီးပါဗျာ၊ မျက်လုံးက အနီရောက် လင်းကွင်းကြီးလောက်ရှိတယ်၊ လျှာကြီးကလည်း တတောင်လောက်၊ အစွယ်ကြီးနှစ်ချောင်းနဲ့ လာသမျှလူကို အစတော့ လူယောင်ဆောင်ပြီး ခရီးသွားဟန်လွှဲ တခုခုမေးသလိုနဲ့ အနားရောက်တော့မှ ဟား…. ဆိုပြီးတော့… ဒန်တန်တန့် ဦးပေါက်၏ ဆက်ရန်အပိုင်း ၁၆ကိုမျှော်….
အခုလိုဖြည့်ရေးပေးကြတာ လိုအပ်ချက်တွေ လွဲချော်နေတာကို ထောက်ပြပေးကြတာ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင် ကျနော်အပါအ၀င်လူတော်တော်များများက ဒိုင်ယာရီရေးတဲ့အလေ့အကျင့်မရှိကြပါဘူး။
ဒီတော့ ကျနော်လဲ ငယ်ငယ်က သတိရစရာလေးတွေကို ပြန်ရေးချင်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ဦးနှောက်ကို ပြန်ပြီးမေးခွန်းတွေ
ထုတ်လို့ သူသတိရသလောက် သူပြန်ဖြေသလောက်လေးကို ရေးနေတာပါ။
ကျနော့်အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကိုယ့်မွေးရပ်မြေနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဝေးနေသူတွေ ကိုယ်ဇာတိကို သတိရလို့
bigcat ရေ သူရဲကြီးဆိုတာကတော့မှားပါတယ်ကွယ် ဒီတော့လက်ထဲက ဘော့လုံးကို အပ်နဲ့ဖောက်လိုက်ပါပြီကွယ် ဖောင်း…………..